अन्तर्राष्ट्रिय - TheSidhaKura
Category Archives: अन्तर्राष्ट्रिय
अफगानिस्तानको राजधानी काबुल प्रवेश गरे ता’लिबान ल’डाकु
काठमाडौँ । अफगानिस्तानमा ता’लिबान राजधानी का’बुलमा प्रवेश गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार ता’लिबानका ल’डा’कु काबुल प्रवेश गरिसकेका हुन् ।स्थानीयले का’बुल भित्र ता’लिबान ल’डाकु पसिसकेको बताएको एएफपीले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै ता’लिबानले अफगानिस्तानको सबै सीमा क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच पाकिस्तानले आफ्ना आफगानिस्तानसँग जोडिएको सीमा क्षेत्र… Read More »
भ्रष्टाचारको अ’भियोग लागेका ट्राफिक प्रहरीको घरमा सुनको ट्वाइलेट
हालै रुसका एक वरिष्ठ ट्राफिक प्रहरी अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि सरकारी अधिकारीहरु प्रहरीसहित उनको घर छा’पा मा’र्न गएका थिए। प्रहरी कर्णेल अलेक्सी साफोनोभसहित ६ प्रहरीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो। जब प्रहरी अलेक्सीको घर पुगे उनीहरु आश्चर्यमा परे। कारण, उनको घरको ट्वाइलेट पनि सुनले बनेको देखियो। दक्षिणी क्षेत्र स्टा’भरोपोलमा रहेको अलेक्सीको घर आलिसान थियो। त्यहाँका कोठाहरु… Read More »
आफ्नी आमा र बहिनी गु’माएका बालक सिरिया छाडेर जो’र्डन जान लागेका त्यो भावुक दृश्य
काठमाडौं। सिरियामा गृह यु’द्धका कारण लाखौं मानिसले ज्या’न गु’माएका हुन्। ९ वर्षदेखि जारी यु’द्धमा मृ’त्यु हुनेको सङ्ख्या तीन लाख ८० हजार भन्दा बढि छ। मा’रि’नेमा हजारौं बालबालिका समेत छन। सिरियामा जारी द्व’न्द्व’का कारण एक करोड ३० लाख बढि सि’रियाली ना’गरिक आन्तरिक वा बाह्यरूपमा विस्थापित भएका छन्। यु’द्धका कारण सिरियामा अर्बोँ अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक संरचना… Read More »
क्यानाडाले नेपाली सहित १२ लाख मानिस लैजाने, इतिहासमै धेरै आप्रवासी भित्र्याउने [बिस्तृतविवरण]
ओटावा । क्यानडाले आगामी ३ वर्षमा १२ लाख आप्रवासी भित्र्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यसको लाभ नेपालीलेपनि लिन सक्ने त्यहाँको संघीय आप्रवासन मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय आप्रवासन मन्त्री मार्को मेन्डिसिनोले कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र उकास्नमा आप्रवासीले ठुलो टेवा पु¥याउने भन्दै यस्तो योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। मुलुकलाई ठुलो संख्यामा जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्दै उनले आप्रवासनद्वारा… Read More »
बङ्लादेशमा बलात्कारीलाई मृ त्यु द ण्ड दिने का नुन मन्त्री परिषदबाट पारित
ढाका । बङ्लादेशमा ब लात्का री लाई मृ त्यु दण्ड को सजाय दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ब ला त्का री लाई मृ त्यु द ण्ड दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । धेरैतिरबाट सुझाव, माग र दवाव आएकाले यस्तो व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव तयार पारेको कानुन मन्त्री… Read More »
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको घरमा चोरी, चोरले रोनाल्डोको टोपीसमेत तान्यो !
एजेन्सी, २३ असोज । पोर्चुगलको राष्ट्रिय खेलाडी तथा युभेन्टसका स्टाइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोको घरमा चोरी भएको छ । उनको पोचुगलको मडेइरास्थित रहेको घरमा शुक्रबार चोरीको भएको हो । चोरले घरमा पसेर केही बस्तु चोरीसमेत गरेको र अन्य आश्चार्य वस्तु चोर्ने प्रयास समेत गरेको बताइएको छ । चोरले रोनाल्डोको घरबाट रियल म्याड्रिडका पूर्व स्टारको घरबाट हस्ताक्षर गरिएको… Read More »
युक्रेनमा सैनिक विमान दुर्घटना : २२ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ, १० असोज । युक्रेनमा सैनिक मान दुर्घटना हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । एन्तोनोव–२६ विमान अवतरणका यक्रेनको पूर्वी शहर खार्किभमा दुर्घटनामा परेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । विमानमा खार्किभ एयरफोर्स युनिभर्सिटीका क्याडेटहरु प्रशिक्षण उडानका लागि सवार थिए । दुर्घटनामा परेको विमानमा २७ जना सवार रहेका युक्रेनको आपतकाल मन्त्रालयले जनाएको छ । विमान दुर्घटनामा २… Read More »
अमेरिकामा टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने पक्का!
वासिंटन। अमेरिकाले चिनियाँ कम्पनीको उत्पादनका एप्लिकेशनहरुका साथै केही समय यतादेखि चर्चित मुद्दा बनेको टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प टिकटकसहितका चिनियाँ एप्शमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको जानकारी गराएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले सो एप्शमाथि यही सेप्टेम्बरको १५ तारिखदेखि चिनियाँ सामाजिक सञ्जालका एप्लिकेशनहरुमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारे यसअघि निर्णय भइसकेको र अब त्यो… Read More »
पाँच तले भवन भत्किँदा ९० जना पुरिए, उ’द्धारकाे काम चल्दै…
काठमाण्डाै भारत महाराष्ट्रमा पाँच तले भवन भ’त्किँदा झण्डै ९० जना पुरिएका छन् । एक जनाको ज्या न गएको छ । हिजो बेलुकी महाराष्ट्रको रायगढ जिल्लाको महाडमा पुरिएकामध्ये ८ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । एक जनाको भने ज्यान गएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । महाड शहर दक्षिण मुम्बईबाट १ सय ८० किलोमिटरको दूरीमा पर्छ ।… Read More »
एजेन्सी – यूइएफए च्याम्पियन्स लिगको क्वाटर फाइनल खेलमा जर्मन क्लब वार्यन म्युनिखले स्पेनिस महारथी बार्सिलोनालाई ८–२ ले हराएको छ । शनिबार बिहान भएको खेलमा जर्मन क्लब वार्यन म्युनिखले बार्सिलोनालाई फराकिलो अन्तरले हराउँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको हो। पोर्चुगालको सिस्बोनस्थित रंगशालामा भएको खेलमा वार्यनका थोमस मुलरले चौथो मिनेट मै गोल गरी खेलमा अग्रता कायम गरेका… Read More »